Multi Color Durable M-XXXXL Flat Lock Stitching Lightweight Men Swimsuit |
Bee asọmpi gara aga n'ime ọdọ mmiri yi jammer teknụzụ e mere iji melite arụmọrụ gị. Nyocha site na akwa ntachi obi + nke nwere ụzọ anọ maka njigide ọdịdị na ngwụcha chlorine na-eguzogide ọgwụ maka ụdị ogologo oge, ala a na-ehicha ngwa ngwa na-enye mkpuchi na nkasi obi.
Biko họrọ oke kwesịrị ekwesị dị ka tebụl emelitere na-esonụ.
Size M, Uwe 28 '' - 30 '',
Size L, n'úkwù 30 `` - 32 '',
Size XL, Uwe 32 `` - 34 '',
Size XXL, Ukwuu 34 '' - 36 '',
Size XXXL, ukwu 36 `` - 38 '',
Size XXXXL, 37 n'úkwù '' - 39 ''
Fechaa, ngwa-ihicha 2-ụzọ gbatịa ákwà ama maka magburu onwe udi njigide na muscle stabilizing mkpakọ.
Anyị ogologo na-adịgide adịgide na kacha mma-ere chlorine eguzogide ákwà. Na-ejigide agba na ọdịdị igwu mmiri mgbe igwu mmiri.
Chlorine na-eguzogide ọgwụ ma hazie maka mmegharị. Na-echekwa ihe ruru 10x ogologo karịa akwa mmiri.
Nkwado kachasị mma na nkasi obi maka ndị dị na mmiri 2-3 ụbọchị n'izu.
Nke gara aga: Mmiri Sensing Nkasi Obi Mgbanwe Ndị okenye ensmụ nwoke Igwu Na-eyi Maka Igwu
Osote: Eke Mpekere Akụkụ Na-agbanwe Mmechi 29.5 ″ -45.3 ″ Mens Na-asa Ahụ
Long-adịgide adịgide Fabric Non ileghara Kemeghi Drawstr ...
100% Polyester ọsọ ọsọ Slim Fit Mens Swim Shorts